Five mamiriro nokuti tsika zvikamu
Tsikwa chikamu inoreva dzichiumbwa nzira kushandisa rimwe simba kune mundiro, mumwe zviuno, nenyere, mumwe Profile, uye yakafanana pedyo wokudhinda uye Foroma kuti plastically deform kana vachaparadzanisa ndokutsika chikamu, nokudaro kuwana workpiece munhu achida rokuumba uye kukura.
Asi zvinotevera shanu ezvinhu anofanira akasangana:
1, kubudiswa simbi vachinyatsogona zvikamu vanofanira kubatsira kubudiswa huripo zvokushandisa, muitiro midziyo uye muitiro napo.
2, iyo simbi vachinyatsogona zvikamu processing kuna kuunza kwagara kushandiswa, edza kuita ndeiya yakaita zvakarurama pamwero uye pamusoro roughness pamwero zvinodiwa yakaderera, uye ndiyo inoita kuti chigadzirwa Ivowo, kuderedza tsvina, uye nechokwadi chigadzirwa unhu uye isimbe.
3, chicherwa vachinyatsogona zvikamu processing vanofanira kuva nyore chimiro uye kunzwisisa mamiriro, kuitira kurerutsa chacho marongerwo nyore nhamba urongwa, ndiko, kuti apedzise kubudiswa vachinyatsogona zvikamu pamwe mudukusa uye nyore tsika muitiro, kuderedza kubudiswa nedzimwe nzira, uye kunobatsira kuti tsikwa oparesheni hwezvekukurukurirana sangano Mechanisation uye zvoga kugadzirwa kuti kuwedzera basa yauinayo.
4, simbi vachinyatsogona zvikamu processing vanofanira kusangana chigadzirwa kushandiswa uye zvekushandisa kuita, uye hunogona kungoparara vakaungana uye pakugadzira.
5, kubudiswa simbi vachinyatsogona zvikamu kunge inosimudzira kuvandudza Utilisation nesimbi zvokuvakisa, achidzikisa siyana uye nokurondedzerwa nezvinhu, uye kuderedza kudyiwa zvinhu napo. Shandisa rweruzhinji zvinhu pose pazvinobvira, uye kuti zvikamu takasununguka sezvinobvira uye zvishoma tsvina.
Post nguva: Jan-04-2019